"Jesosy, Izay Mpanafaka antsika amin’ny fahatezerana ho avy."1 Tesaloniana 1:10
"Aza matahotra, minoa fotsiny ihany."Marka 5:36
"Aza matahotra izay atahorany na mangovitra ianareo."Isaia 8:12
Mampitebiteby fatratra ny vina ara-toekarena sy ara-tontolo iainana; ary ireo ady misy ankehitriny dia atahorana hiteraka ady hafa koa… Eny, mitombina ny tebitebin’ny maro momba ny hoavy.
Ny Baiboly dia manambara amintsika tranga mampihorohoro noho izany, rehefa hihatra eto an-tany ireo fitsaran’Andriamanitra.
Nefa ny mbola lehibe kokoa amin’ny olona tsirairay, dia ny hoe: voatendry ho faty indray mandeha izy, “ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana” (Hebreo 9:27). Tsy miezinezina ve izany? Izay rehetra tsy nandray an’i Jesosy ho Mpamonjiny tamin’ny androm-piainany, dia tsy maintsy hiseho eo anatrehan’Ilay Andriamanitra masina sy marina, “samy hotsaraina araka ny asany” ary “hatsipy any amin’ny farihy afo” (Apokalypsy 20:13,15).
Anio, ny fanirian’Andriamanitra, Izay tia ny voariny, dia ny hisarika ny sain’ny tsirairay hijery ny hoavy atolony azy, izany hoe fahasambarana mandrakizay eo anatrehany. Raha mbola velona ihany koa isika, dia mandodona antsika Andriamanitra mba hanaiky ilay fomba hialana tsy hiharan’ny fanamelohana. Io fomba io dia ny finoana an’i “Jesosy, Izay Mpanafaka antsika amin’ny fahatezerana ho avy”. Ireo izay mino an’i Jesosy dia anaovan’Andriamanitra zavatra lehibe lavitra noho ny fanafahana fotsiny azy ireo amin’ny fahatezerany. Atsangany ho zanany izy ireo. Vita fihavanana sy mahita fitia aminy, raha vao mitoky amin’i Jesosy Kristy Zanany fotsiny. Dia afaka miteny izy ireo hoe: “Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako?” (Salamo 27:1).